Ugu Horayn 100% Helikopter Ruush ah oo Dijitaal ah Nashqadeeyay ayaa Cirka Gasha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Ugu Horayn 100% Helikopter Ruush ah oo Dijitaal ah Nashqadeeyay ayaa Cirka Gasha
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Helikobter Ruush ah
Helicopter-ka casriga ah ee Ka-226T, kaas oo ay samaysay shirkadda "Helicopters Ruush" Holding Company (qayb ka mid ah Rostec State Corporation), ayaa bilaabay tijaabooyinka duulimaadka waxayna dhamaystirtay duulimaadkeedii ugu horeeyay ee dhismaha tijaabada duulimaadka ee Xarunta Helicopter Qaranka "Mil iyo Kamov."
Tani waa helicopter-kii ugu horreeyay ee Ruush ah, dukumeenti naqshadeed oo si buuxda loo qaabeeyey.
Helicopter-ka la cusboonaysiiyay ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay bandhigga hawada sare ee caalamiga ah ee MAKS-2021.
Waxay ka dhigi doontaa bandhigeeda caalamiga ah ee Dubia Airshow 2021 ee soo socda oo lagu qaban doono Noofambar 14-18 ee Dubai, UAE.
Andrey Boginsky, oo ah Agaasimaha Guud ee Shirkadda Helicopters-ka ee Ruushka, ayaa ka warbixiyey horumarka diyaaradda Ka-226T helicopter fudud mashruuca casriyeynta intii lagu jiray kulan shaqo oo uu la yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Markii ugu horeysay, helicopter-ka la cusboonaysiiyay waxaa lagu soo bandhigay bandhigga hawada sare ee caalamiga ah ee MAKS-2021, iyo bandhiga caalamiga ah ee Ka-226T oo la casriyeeyay ayaa ka dhici doona Dubia Airshow 2021 ee soo socda, kaas oo la qaban doono November 14 ilaa 18 ee Dubai (UAE).
“Ka-226T oo la casriyeeyay waa helikobterkii ugu horreeyay ee Ruushka lagu sameeyo iyadoo loo eegayo dukumentiyada naqshadeynta dhijitaalka ah. Hindisahani waxa uu suurtageliyay in si weyn loo dhimo wakhtiga lagu dhisayo mishiinka iyo in la bilaabo tijaabooyinka duulimaadka muddo gaaban gudaheed. Dhamaadka usbuucan, Ka-226T ee la cusboonaysiiyay ayaa ka soo muuqan doona bandhigyada caalamiga ah oo qayb ka ah Dubai Airshow 2021, waxaana ku kalsoonahay in ay kicin doonto xiisaha dhabta ah ee macaamiisha ajnabiga ah sababtoo ah waxqabadkeeda duulimaadka ee wanaagsan, taas oo u oggolaanaysa in ay ku shaqeyso meel sare ilaa 6.5 kilomitir, kala duwanaansho, raaxo iyo badbaado, "ayuu yiri wakiilka kooxda duulista ee Rostec, "ayuu yiri. .
Thanks to sifadeeda muhiimka ah - la qabsiga duulimaadyada joogga sare - mashruuca casriyeynta Ka-226T wuxuu helay magaca hawlgalka "Climber." Qaabka hawada ee diyaarada waxa uu leeyahay nakhshad cusub oo si weyn loo wanaajiyay aerodynamics taas oo ka soocaysa noocyadii hore ee qoyska Ka-226. Fududeynta qaabka hawada sare ee la hagaajiyay waxaa lagu sameeyay iyadoo la isticmaalayo walxo fudud oo casri ah. Ka-226T waxay heshay madaxa rotor-ka cusub, garbaha, iyo sanduuqa gearbox ee ugu muhiimsan, iyo sidoo kale nidaamka shidaalka u adkaysta naxdinta leh, kaas oo buuxiya shuruudaha badbaadada ee kordhay.